Dhibaatooyinka daabacaadda Qoraha Tooska ah ee WordPress
Dhawaan Qoraa Toos ah ayaa bilaabay inuu dhibaatooyin abuuro, ugu yaraan laba xaaladood: 1. Marka maqaal cusub la abuuro, markii la soo dirayo wuxuu dirayaa fariin qalad ah inkasta oo maqaalka la soo rogay. Kadib, mar labaad isku day, sameyso maqaal cusub oo ah in markii kiiska la ogaado, ay haddaba jiraan maqaallo dhowr ah oo la daabacay ...
3 plugins for WordPress oo qiimihiisu yahay maalgashado
WordPress wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee sida Furan Furanku u noqon karo qaab ganacsi oo qof kastaa uga faa'iideysto qiimo jaban iyo duruufaha adeegga ee aan u baahnayn inay ka masayraan qaabka lahaanshaha. Ma ahan wax ka yar madal ay dusha ka saaraan ...
Internet iyo Blogs, Sii jiritaanka blogs
Cybernetic, hosting adeeg weyn
Maanta waxaa jira adeegyo badan oo martigelin lacag la’aan ah, sida Wordpress.com iyo Google Blogger oo hadda loo yaqaan Google Blogs. Laakiin waqti ka dib, boggaga qaan-gaadhka ah iyo shirkaduhu waxay u baahan yihiin adeeg dammaanad ka qaadaya amniga qiimaha dhaqaale iyo shirkadeed ee joogitaanka internetka uu matalayo. Sidoo kale tan waxaa ku jira waxyaabo kale oo beddel ah; gudaha…
news WordPress 3.3 Sonny
Nooca cusub ee Wordpress oo yimid isla markii sanadka 2011 dhammaadkiisa, ayaa keenaya xoogaa war ah, ma badna laakiin waa muhiim: Beerihii ay isbadalada ka jireen, buufin digniin ah ayaa kor loo qaadayaa markii ugu horreysay ee la isticmaalo, taas oo muujinaysa isbeddelka. Kadib gudiga bidix hada halkii laga furi lahaa yaamayska ...
sawiirrada xiriira Post dhalin sawiirrada iyo plugins
Waqti yar ka hor waan ka takhalusay Arthemia, oo ah shax leh bilic aad u wanaagsan oo loogu talagalay Wordpress laakiin faa'iido darradu tahay kor u qaadista sawirrada thumbnail oo leh shaqada timthumb ee keenaysa dhibaatooyin culus isticmaalka baaxadda kheyraadka. Kadib dhowr tikidh oo ay kiciyeen maamulayaasha HostGator waxaan go aansaday inaan keyd ugu sameeyo qaabka ...
403 Error dhibaato Reebay
In kabadan hal jeer wax sidan oo kale ah ayaa nagu dhacay, oo markii aan soo galno bartayada fariinta soo socota waxay u muuqataa: Xaaraan Ma lihid ogolaansho inaad ku soo gasho /index.php serverkan. Intaa waxaa sii dheer, khalad 403 ah oo Reebban ayaa lala kulmay intii la isku dayayay in loo isticmaalo ErrorDocument si loo maareeyo codsiga. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 FrontPage / 5.0.2.2635 Server…
Qalab isbarbar dhiga koodhadh ama fayl
Badanaa waxaan haysannaa labo dukumiinti oo aan dooneyno inaan isbarbar dhigno. Badanaa way dhacdaa markaan codsano isbeddelada mawduuca ee ku jira Wordpress, halkaas oo feyl kasta oo php ahi u taagan yahay qayb ka mid ah shaashadda ka dibna ma naqaanno wixii aan sameynay. Waa isku mid markii la taabto Cpanel waxaan tirtirnaa feyl, ama galka ma uusan ku dhammeynin soo gelinta faylka. Daqiiqad kale, waa ...
Cusbooneysiin cusub oo WordPress ah ayaa timid. Waxyaabo badan ayaa isbeddelay barnaamijkan maareynta maadooyinka sanadihii la soo dhaafay, hadda cusbooneysiinta noocyada cusub waa badhan fudud. Kuwa naga mid ah ee dhibaatadan ku qabanaya iyada oo loo marayo ftp, daqiiqado qaarkood xitaa waxaan u nimid inaan u maleyno in fududaanku uu koodhku lumiyo nimcada. ...
Gajes ee hijrada ee Geofumadas.com
Ugu dambeyntiina, xog uruurintu waxay ku dhowdahay in la nadiifiyo ka dib hijro ka timid Wordpress MU oo ku taal Cartesianos una gudubtay xarun lagu marti geliyey Cpanel. Tan awgeed, dhowr plugins iyo helitaanka phpmyadmin ayaa iga dhigtay madadaalo. Dhowr maalmood - iyo habeenno - imaansho iyo socdaalba. Halkan waxaan ku soo koobayaa xariiqyada qaar, ka dib waxaan u maleynayaa ...
Egeomates 3.0: Go'aamada SEO
2011 waxaa loola jeedaa tallaabo muhiim ah Geofumadas, ka dib 3 sano oo u shaqeynayay sidii subdomain Cartesian ah. Waxaan tan kala hadalnay Tomás, oo aan ugu mahadceliyo fursada oo aan rajaynayo inuu ilaaliyo xiriirka muhiimka ah ee kan iyo xaaladaha kale ee aan la kulanay. Reer Carteans, inkasta oo ay waxyeelo ka soo gaadhay waqtigaas ...
10 khadadka maalin la wadaago
Sidee ku dhacday anigu horay ugama fikirin! Maya, ma aanan dhiman. Kaliya hal nasiib oo beddel subdomain ah. Shaqsiyan? Dhowr maalmood ka hor ima aqrinin. Wareejin fudud. Wordpress MU waa musiibo. Ah, waa inuu jiraa codsi dhamaadka. Sidoo kale cusbooneysii API Maps Google, iyo Live Writer. Haye! Google waa cajiib.…
Hadda haa, si loo rakibo WordPress
Qoraalkii hore, waxaan ku aragnay sida loo soo dejisto loona soo geliyo Wordpress martigelintayada. Hadda aan aragno sida loo rakibo. 1. Abuur xog-ururin Tan, Cpanel, waxaan ku xulannaa Macluumaadka MySQL. Halkan, waxaan ku muujineynaa magaca keydka macluumaadka, xaaladdan waxaan u isticmaali doonaa qiijiye waxaanna riixayaa badhanka abuurka. Eeg sida ay u muuqato ...